ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း - Wuxi Union
Wuxi Union Co., Ltd သည် Wuxi (ရှန်ဟိုင်းမှ 1 နာရီခန့်အကွာ) တွင်တည်ရှိသည်,2006 ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။.ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းရေးကိရိယာများ၊ ကြမ်းပြင်ကြမ်းတိုက်များ၊ ပြတင်းပေါက်ညှစ်စက်၊ ဖုန်မှုန့်များ၊ တံမြက်စည်းများ၊ စုတ်တံများ၊ မိုက်ခရိုဖိုက်ဘာသုတ်ခြင်း၊ ဖယောင်းတိုင်များ၊ အမွှေးနံ့သာပစ္စည်းများ စသည်တို့အပါအဝင် အိမ်သုံးပစ္စည်းများကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တင်ပို့ရောင်းချသူဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် US၊ EUROPE နှင့် JAPAN စျေးကွက်သို့ အဓိကတင်ပို့ပါသည်။၎င်း၏အရည်အသွေးကောင်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းများအတွက်.ငါတို့နှင့်အတူရေရှည်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလည်းရှိသည်။ALDI နှင့်LIDL UNGER etc. 2013 ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အိမ်သန့်ရှင်းရေးကိရိယာစက်ရုံကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး BSCI လက်မှတ်ကို အောင်မြင်ခဲ့သည်။စိတ်ကြိုက်လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် မတူညီသောဖောက်သည်များအတွက် OEM မှာယူမှုများကို လုပ်ဆောင်ပါ။ကျွန်ုပ်တို့၏အလွန်ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေး၊ အချိန်မီပေးပို့မှု၊ "အနိုင်ရ" ဖြေရှင်းချက်နှင့် သုံးစွဲသူများနှင့် ရေရှည်ဆက်ဆံရေးကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မှုတို့အတွက် လူသိများပါသည်။
ယနေ့ခေတ်တွင် အိမ်သုံးသန့်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းများမှ အိမ်အလှဆင်ပစ္စည်းများအထိ တင်ပို့ရောင်းချရန် ထုတ်ကုန်မျိုးစုံရှိသည်။1. ကြမ်းပြင်သန့်ရှင်းရေးစီးရီး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြမ်းတိုက်ထုတ်လုပ်မှုတွင် အလွန်ကျွမ်းကျင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်များတောင်းဆိုချက်အရ microfiber အထည်၊ chenille ကဲ့သို့သော မတူညီသောလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် မတူညီသောပစ္စည်းများဖြင့် ကြမ်းတိုက်ပေးပါသည်။ကြမ်းတိုက်အဖုံးသာမက ဝါးလုံးများ၊ ကြမ်းတိုက်ဘုတ်များ အပါအဝင် ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိသော ကြမ်းခင်းများကိုပါ ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။2. မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်း သန့်ရှင်းရေးကိရိယာများ၊ အမျိုးမျိုးသည် အလွန်ကြွယ်ဝသည်၊ အထူးသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝါးလက်ကိုင်စုတ်တံစီးရီးများကို ပေးဆောင်သည်၊ ၎င်းတို့သည် လူသားဆန်သော ဒီဇိုင်းနှင့် eco-friendly feature အတွက် နိုင်ငံရပ်ခြားဈေးကွက်များတွင် ရေပန်းစားပြီး ကြိုဆိုကြသည်။3. မိုက်ခရိုဖိုက်ဘာ ဖုန်မှုန့်၊ မျက်မမြင် သန့်စင်ဆေး၊ ပြတင်းပေါက် ညှစ်စက် ကဲ့သို့သော အခြား သန့်ရှင်းရေး ပစ္စည်းများ။နောက်ဆုံးတွင် ဖယောင်းတိုင်များနှင့် ရနံ့ကုထုံး rattan diffuser ဖြစ်သည်။ပုလင်းဖယောင်းတိုင်များ၊ သံဖြူဖယောင်းတိုင်များ၊ ပွဲတော်ဖယောင်းတိုင်များ၊ ချစ်စဖွယ်တိရိစ္ဆာန်များ သို့မဟုတ် စိုက်ထားသော ဖယောင်းတိုင်များနှင့် အရည်အသွေးမြင့် ကျူခင်းများကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်စီးရီးအားလုံးအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဖောက်သည်များအတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် OEM သို့မဟုတ် ODM ကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရောင်းချမှု- ယခုကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို Eu၊ USA၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ အဓိကတင်ပို့နေပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ALDI နှင့် LIDL နှင့် UNGER တို့နှင့် ကောင်းမွန်ပြီး ရေရှည်စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် မြင့်မားသော တာဝန်သိစိတ်ဖြင့် ထိရောက်ပြီး ဆန်းသစ်တီထွင်သော စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် မတူညီသောဖောက်သည်များအတွက် အိမ်တွင်းထုတ်ကုန်များကို ရှာဖွေပေးသည့် ကုန်သွယ်မှုဌာနလည်း ရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ထုတ်ကုန်မျိုးကွဲများကို ပံ့ပိုးပေးရာတွင် လေးနက်သောအတွေ့အကြုံရှိသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက် အရည်အသွေးမြင့်မားသော ထုတ်ကုန်များကို ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းဖြင့် ပေးဆောင်ရန် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်သည်။ပို၍အရေးကြီးသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြိုတင်မှာယူမှုမှ ရောင်းချပြီးနောက်အထိ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝန်ဆောင်မှုကို အမြဲပေးပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်မှန်းချက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားလုံး စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေရန်နှင့် နှစ်ဆအနိုင်ရသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်စေရန်ဖြစ်သည်။သင်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုစိတ်ဝင်စားပါကကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုဆက်သွယ်ရန်အသစ်နှင့်အဟောင်းဖောက်သည်အားလုံးကိုကြိုဆိုပါသည်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။